Boosaaso: Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku Dhigay Walxaha Qarxa Iyo Raggii Waday – Goobjoog News
Ciidamada ammaanka maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa gacanta ku dhigay Walxaha qarxa iyo sidoo kale Shan nin oo la sheegay in walxahaasi ay wadeen.
Taliyaha ciidamada madaxtooyada Puntland C/rashiid C/raxmaan Ismaaciil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxadan lagu soo diyaariyey Saddex fuusto, lana doonayey in lagu weeraro Saddex meel oo kala duwan, ayna hayaan raggii waday iyo gaarigii lagu waday intaba.
Wuxuu tilmaamay taliyaha sidoo kale in ciidanka ay hadda wadaan baaritaan, islamarkaana xilliyada soo aadan ay arrintaan faah faahin buuxda ka bixin doonaan.
“Waxay ciidamada qabteen qaraxyo lagu diyaariyey Saddex fuusto, la doonayey in la saaro gaadiid is qarxin ah, ilaah baa mahad leh, hadda baaritaan ayaan ku haynaa waxaana qabannay raggii waday oo Shan ah” ayuu yiri Taliyaha,
Ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka wadeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Madaxweyne Farmaajo Oo Lagu Soo Dhoweeyay Ankara